Thwebula Samsung Kies 3.2.16084.2 futhi 2.6.4.17113 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Samsung Kies
I-Wikipedia: Samsung Kies
Samsung Kies – isofthiwe ukuphatha omakhalekhukhwini kanye namadivayisi eziphathwayo kusukela Samsung inkampani. Isofthiwe kwenza ukuba ubuyekeze uhlelo lokusebenza lwe-device yakho, buka bese ukuhlela idatha yakho siqu, ulalele umculo, njll Samsung Kies isekela ukuvumelanisa idatha phakathi kwefoni yakho nekhompyutha ngokusebenzisa i-Bluetooth, USB noma Wi-Fi. Futhi Samsung Kies ikuvumela ukulanda izicelo inkonzo Samsung Apps and ukuvumelanisa oxhumana nabo Microsoft Outlook, i-Google kanye Yahoo.
Izindlela uxhumano Different
Ukucinga idatha by angukhiye
Thwebula Samsung Kies
Isofthiwe ukudlulisa idatha futhi uphathe amafayela takhiwo ehlukahlukene kusukela namadivayisi akude ngokusebenzisa ubuchwepheshe obungenawaya nefu.
Amazwana ku Samsung Kies
Samsung Kies software ehlobene
Imeneja for omakhalekhukhwini wenkampani Nokia. Isofthiwe ikuvumela ukuba uphathe amafayela, oxhumana nabo, imiyalezo futhi uvumelanise idatha nge computer yakho.
Isofthiwe ukunikeza amalungelo Umsuka amadivaysi Android. Futhi kusekela update abashayeli kunciphisa umthwalo phezu izingxenye ezihlukahlukene idivayisi.
I-Media Go – ikhambi elihle kakhulu lokuhlela nokudlala amafayela emidiya kwikhompyutha yakho, futhi idlulise amafayela emidiya phakathi kwamadivayisi ekhompyutha nawakwaSony.
Le Amatebhe video Converter oguqula amafayela emidya zibe takhiwo ehlukahlukene. Isofthiwe isekela popular alalelwayo ifomethi, futhi ibuye iningi takhiwo image.
Isofthiwe encode futhi ukunquma amafayela video. Isofthiwe isebenzisa eziphambili ifayela zlib algorithm enikeze esiphezulu izinga image.
BS.Player – Isidlali esisebenzayo ngokuxhaswa kwamafomethi wemidiya athandwayo. Isoftware iqukethe uhla lwemisebenzi ewusizo futhi ikuvumela ukuba wenze ngezifiso imibhalo engezansi.
Ithuluzi elinamandla ukusebenza nge takhiwo image ezahlukene CD kanye DVD. Futhi isofthiwe isekela dalo of bootable idatha abathwali.
I-Bitwar Idatha Ukubuyiselwa emuva – isoftware yakhelwe ukubuyisa idatha elahlekile yezinhlobo ezahlukahlukene, kufaka phakathi izithombe, umsindo, ividiyo, amadokhumenti namanye amafayela kukhompyutha namadivayisi axhunyiwe axhumene.
I-G Data AVCleaner – isoftware yakhelwe ukususa imikhiqizo ye-G Data antivirus, edingekayo ezimweni zokukhishwa kwe-antivirus okungaphumelelanga noma okungaphelele ngezindlela ezijwayelekile zeWindows.